Zon'olombelona · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Jolay, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana31 Jolay 2012
Minitra vitsy nialoha ny Iftar (fotoana fampitsaharan'ny Miozolmana ny fifadian-kanina fanao rehefa Ramadany ), Hassan Ould Abba [ar], Maoritaniana iray diplaomaty izay niasa amin'ny maha-mpanolotsaina azy tao amin'ny Masoivoho Maoritaniana ao Koety, dia nandoro tena [ar] tao amin'ny distrikan'i Ksar, any Avaratr'i Nouakchott, renivohitra Maoritaniana. Nihazakazaka hamonjy azy ihany ny...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Jolay 2012
Afrika Mainty26 Jolay 2012
Hatramin'ny volana Aprly, ny M23, ivondronan'ireo mpiady tranainy tao amin'ny mpihoko tutsi Kongoley avy amin'ny Congrès national pour la défense du peuple CNDP dia manakorontana ny faritany Avaratr'i Kivu any Atsinanan'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo. Ankoatry ny zavatra hafa dia takian'ireny miaramila ireny ny hanajàna ny fifanarahana tamin'ny 2009 izay, araka...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana26 Jolay 2012
Fony nisy ny antso hanaovana Androm-Pahatezerana iray tao Arabia Saodita tany amin'ny 11 Martsa 2011 tany, dia azo nisaina tamin'ny rantsan-tànana ireo mpanao hetsi-panoherana sahy niatrika ny polisy marobe. i Khaled Al Johani no hany iray tamin'ireo voarakitra tanaty horonana sy nosamborina avy eo. Maneho hevitra momba ny famotsorana an'i...
Azia Atsimo25 Jolay 2012
Namono olona 32 raha kely ary nandratràna maro hafa ny ady teo amin'ireo foko Bodo zanatany sy ireo voanjo miozolmana tao amin'ny fanjakan'i Assam. Manodidina ny 70.000 ireo mponina no nandositra ny toeram-ponenan-dry zareo hatramin'ny nipoahan'ny herisetra ary nialokaloka any amin'ireo toby vonjimaika. Raha kely dia tanana 60 avy amin'ny...
Amerika Avaratra24 Jolay 2012
Taorian'ny nitifiran'ny polisy an'i Manuel Díaz, lehilahy iray Latino -Amerikana 25 taona, tsy nitana fiadiana, tamin'ny Sabotsy 21 Jolay nandritra ny fifanenjehana tao Anaheim, California, nanao hetsi-panoherana ny habibian'ny polisy sy tamin'ny fitorohana ny fiakaran'ny herisetra atao azy ireo ny olona. Lahatsary sy fanehoan-kevitra avy aty anaty aterineto no zarainay...